Axmed Karaash: Waan kala yaacaynaa haddii lagu dhaqmi waayo dastuurka Puntland | dayniiile.com
Home WARKII Axmed Karaash: Waan kala yaacaynaa haddii lagu dhaqmi waayo dastuurka Puntland
Axmed Karaash: Waan kala yaacaynaa haddii lagu dhaqmi waayo dastuurka Puntland
Madaxweyne ku xigeenka Puntland, Axmed Karaash ayaa sheegay Puntland inay kala tagayso haddii aan lagu dhaqmin oo la tixgalin dastuurka lagu heshiiyay.
Hadalkaan ayaa u muuqday mid Madaxweyne ku xigeenka Puntland uu kaga jawaab celinayay kadib markii madaxweyne Siciid Deni uu dhawaan diiday magacaabis uu sameeyay Axmed karaash.
“Buug yaroo calaacashayda le’eg ayaa dadkaas oo dhan isku keenay. Kaas inaan ku dhaqano oo wuxuu na farayo adeecno baa loo baahan yahay, oo isagaa caddaaladu ku jirtaa, haddii kaa la waayo, waan kala yaacaynaa,” ayuu yiri Axmed Karaash.
Axmed Karaash ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxweyne Deni, isagoo sheegay Puntland in aysan ahayn meel tuurta lagu qaan karo sida buraashada biyaha oo kale, isagoo sheegay in dantu ku jirto in la tixgaliyo waxa lagu heshiiyay.
Hadalkan ayuu madaxweyne ku xigeenka Puntland ka sheegay, kadib markii uu manta salaada ciidda meel fagaare ah kula tukaday boqolaal shacab ah iyo masuuliyiin dowladdeed.
Deni iyo Axmed Karaash ayaa isku haya khilaaf dhinaca awoodda ah. Axmed Karaash waxa uu horey u sheegay inay isaga kusoo wareegtay masuuliyadda awooddeed ee Puntland, kadib markii Deni uu aaday Muqdisho kana qeyb galayo doorashada Soomaaliya.
Madaxweyne Deni ayaa diiday arrintaas, isagoo ka hor yimid dhammaan wareegtooyinkii magacaabista ahaa ee uu ku xigeenkiisu uu sameeyay bishaan Abril.
Previous articleSoomaaliya & Caalamka oo Maalintii labaad laga Ciidayo
Next articleAl-Shabaab Oo Saaka Weerar Ku Bilowday Qaraxyo Ku Qaaday Degaan Ka Tirsan Sh/Dhexe
War deg deg ah Wasaarada Arimaha Dibada Soomaliya oo Taageertay Racadeenta...
Mayor: More than 10,000 civilians killed in Ukraine port city of...
A suspect in a mall shooting in South Carolina has been...
Guddoonka baarlamaanka oo kulan ku saabsan Amniga doorashada la qaatay howlgalka...
Rooble iyo Midowga Musharraxiinta oo yeeshay kulan ku saabsan dhaarinta Xildhibaanada
ahmed ali - April 9, 2022 0